Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yesibhakabhaka - I-Ben Ohau Private Luxury Escape - I-Airbnb
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Garry
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe ye-Skylark iyindawo yangasese, yokuvakasha yokunethezeka, enethezekile ngaphakathi kwesimo esikhuthazayo sezwe elingemuva lika-Ben Ohau.
Izungezwe izintaba eziphakeme kanye nobuhle besigodi esivulekile, lokhu akuyona nje indawo yokuhlala ethokomele ngenkathi uvakashela i-Mackenzie Country, kuyisipiliyoni ngokwaso.
Zibonele ukucaciselwa okuhlaba umxhwele kwesibhakabhaka sasebusuku esinezinkanyezi. Thobeka ngenxa yesimo esikhulu esikuzungezile. Xhumana nemvelo futhi ubalekele ijubane lokuphila kwansuku zonke.
Chitha ubusuku ngaphansi kwezinkanyezi
Iqanjwe ngegama lezinyoni ezihlala endlini yethu, i-Skylark Cabin iyindawo yokuhlala ekhuthazwe ngobungcweti, eyakhiwe ngo-2020, futhi iklanywe ngokucabangela ukuze ijabulise kakhulu i-vistas emangazayo ekuzungezile. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe inawo wonke amasevisi owadingayo ukuze ube neholide elithokomele, likanokusho labantu ababili, kodwa futhi liza nomuzwa wokulula okukunikeza indawo oyidingayo ukuze uzizwe ususiwe esimweni esisheshayo nsuku zonke.
Indawo yokuhlala yangasese, yokunethezeka yabantu ababili
Kungakhathaliseki ukuthi ukuphumula nokukhululeka okufunayo, noma isenzo nokuzijabulisa, siqinisekisile ukuthi i-Skylark Cabin inakho konke okudingayo ekuvakasheni okungenakulibaleka.
Umklamo ocabangelayo, wesimanje wenza i-Skylark Cabin ibe okokuzithokozisa okuyingqayizivele ngokwayo. Sakhe ikhaya elincane langasese, likanokusho elikunikeza indawo oyidingayo ukuze uzisuse ngokunethezeka ekuphileni kwansuku zonke.
Usuku lwezinto ezenziwa ngaphandle kulula ukusuka endaweni yakho. Thamela ukuzola - noma uthamele lezo zinto ezibuhlungu osukwini lwesenzo - ngokunethezeka nangaphansi kwezinkanyezi ebhavini elikhulu langaphandle lensimbi engagqwali, efudumele ngamanzi ashisayo ashisayo egesi. Jabulela isidlo sasekuseni ezingadini zethu ezihlelekile, noma isidlo sakusihlwa ngasemlilweni wokungena.
Zonke izici ze-Skylark Cabin zicatshangelwe ukunikeza okokuzithokozisa kwangasese, okuyingqayizivele okukuvumela ukuba usebenzise ngokugcwele lesi sifunda esimangalisayo kanye nezindawo ezimangalisayo ezikuzungezile.
Singathanda ukukwamukela ukuthi uzijabulise nge-Skylark Cabin.
I-carport yamahhala emagcekeni – izikhala ezingu-6
Isifunda sobuhle obuhlaba umxhwele
Ngaphakathi komhlaba odumile we-Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve, i-Skylark Cabin itholakala emizuzwini engu-10 ukusuka edolobheni lase-South Island lase-Twizel, ngama-acre angu-10 (amahektha angu-4) omhlaba onokuthula, wangasese. Lapha imvelo ithatha isigaba esiyinhloko, zonke izinkomba ozibhekayo.
Ihlelwe ngokumelene nengemuva lohla lwe-Ben Ohau, indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe ime ngokuphelele ukuze isebenzise ngokunenzuzo sonke isifunda.
Ukuvakasha okufanele ukukhumbule
Uma ukuphumula nokuphumula kukhona ohlelweni, akudingeki nokuba uphume endlini eyakhiwe ngamapulangwe ukuze ujabulele umlingo wesifunda. I-mesmerising, i-Aoraki Mackenzie International Night Sky Reserve izokwenza ukuthi ujabule njengoba ujabulela ukuzola kwesibhakabhaka esinezinkanyezi kusukela ekunethezekeni kombhede wakho noma ubhavu wangaphandle.
Ipharadesi labantu abathanda izinkanyezi, indawo yokulondoloza isibhakabhaka esimnyama esinegolide ibhekwa njengendawo emnyama kunazo zonke emhlabeni. Indawo eqhelile yendlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe iqinisekisa ukungcola okuncane kokuthatha izithombe kanye nezinkumbulo zesibhakabhaka sasebusuku esinezinkanyezi. Izivakashi kusukela ekupheleni kuka-February kuya ku-Juni zizobona i-Milky Way core emangalisayo ikhula isuka e-South East, noma ngaphezulu kwekhanda lakho njengoba unyaka uqhubeka. Isikhathi esihle kakhulu sokuthwebula i-Milky Way siphakathi kuka-February no-October, nezinyanga zasehlobo zinobusuku obufushane. Ngaphezu kwehlobo, ubuhle obugcwele be-Milky Way kungenzeka bungabonakali, kodwa izigidi zezinkanyezi zisazoqhubeka zihlaba umxhwele.
abafuna isinyathelo bazokhunjulwa ngokulinganayo ngamathuba okuhlola emnyango wabo. Le ndawo yaziwa ngemizila yayo yomjikelezo, ikakhulukazi i-Alps ukuya ku-Ocean Cycleway (2km ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe) ehamba eceleni komsele.
Ukudoba nge-salmon ehlanzekile emiseleni yidrowa elithandwayo, noma zama ukudoba ngesandla sakho emfuleni i-Ahuriri ukuze uthole i-trout. Futhi iyindawo ethandwayo yokuhamba ngesikebhe, ukudoba kanye nokushushuluza emanzini phakathi nezinyanga zasehlobo ezinamachibi amahlanu aseduze nendlu eyakhiwe ngamapulangwe - i-Lakes Ohau, i-Tekapo, i-Pukaki, i-Benmore ne-Ruataniwha.
Imithambeka yokushushuluza eqhweni esezingeni lomhlaba iyibanga nje lehora uma uya e-Ohau Ski Field, futhi inkathi yonyaka iqala cishe ekupheleni kuka-June kuze kube ekuqaleni kuka-October.
ongasivakashela Kulabo abafisa ukuhlola kude nakakhulu, i-Aoraki Mount Cook National Park ikude ngemizuzu engu-58 ngemoto, enamathuba amangalisayo ezithombe kanye nokuhambahamba kweqhwa okumangalisayo, okuhlanganisa i- Hooker Valley ne-Tasman Valley (vakashela iwebhusayithi yoMnyango Wokulondoloza ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngesimo sezulu nokuphepha). I-Lakes Pukaki ne-Ohau ibanga elifushane nje ukusuka e-Skylark Cabin (8km), enokubukwa okumangalisayo kokungcebeleka. Ukubonakala okuhle kwe-Lake Tekapo kungafinyelelwa phakathi nemizuzu engu-56 ngemoto, kuyilapho amadolobha athandwayo e-resort, i-Queenstown ne-Wanaka, nawo ayibanga elithokomele lohambo losuku.
Ukudla Namasevisi Ngenkathi indlu yakho eyakhiwe ngamapulangwe ilungele ukuhlala kwakho, idolobha lase-Twizel linawo wonke amasevisi owadingayo ukuze uthole izinto ezidingekayo, kuhlanganise nezitolo
ezinkulu, iziteshi ze-petrol, neqhwa, ukuzingela nezinto zokudoba. Kunamathuba amaningi okuzijabulisa ngemali yasendaweni entsha namathilomu ahlukahlukene endawo nezindawo zokudlela. Uma ungazange ube nenhlanhla emfuleni ngokwakho, abathandi be-salmon bazojabulela ukuvakashela i-High Country Salmon noma i-Aoraki Salmon ngokokuzithokozisa kwezinhlanzi ezisanda kubanjwa.
Ababungazi abangekho esayithini futhi bayatholakala ngeselula